You are here: Home Products LipIce(colorless)
LipIce(colorless) တွင် SPF 15 ဆ ပါ ဝင် သော ကြောင့် နေ ရောင် ခြည် တိုက် ရိုက် ထိ တွေ့ မှု မှ ကာ ကွယ် နိုင် သည်။
နေ့ စဉ် ပုံ မှန် သုံး စွဲ ခြင်း ကြောင့် နူး ညံ့ လန်း ဆန်း မှု ကို သ ဘာ ဝ အ တိုင်း ရ ရှိ စေ ပြီး နုတ် ခမ်း သား ကွဲ အက် ခြောက် သွေ့ ခြင်းနှင့် အ ရွယ်နှင့်မလိုက်အောင် အိုမင်းရင်ရော်ခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
အသေးစိတ်အနေနှင့်တင်ပြရလျှင်အရောင်ပါသောနှုတ်ခမ်းနီမဆိုးမီ lipice colorless ကိုတစ်လွှာပါးပါးလေးဆိုးပေးခြင်းဖြင့် နှုတ်ခမ်းသားမပျက်စီးအောင် ကာကွယ်ပေးပြီးပို၍ချောမွေ့လှပ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော နှုတ်ခမ်းလွှာတစ်စုံကိုရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တာရှည်ခံဓါတုဆေးဝါးများမပါဝင်သောကြောင့် နှုတ် ခမ်းသားပျက်စီးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ- Mineral Oil, Ozokerite, Petrolatum, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Salicylate, Lanolin, Dimethicone, Menthol, Camphor, Flavor.
အသုံးပြုပုံ-တစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်မှလေးကြိမ်အထိအသုံးပြုနိုင်သည်။ နှုတ်ခမ်းနီမဆိုးခင်သော်လည်းကောင်းဆိုးပြီးမှသော် လည်းကောင်းကြိုက်နှစ်သက်သလိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သတိပြုရန်- lipIce(colorless) ကိုထိခိုက်အနာတရဖြစ်နေသောနေရာများပေါ်သို့အသုံးပြုခြင်းများရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။
Lip on Lip (Water Color)
Lip On Lip Water Colour ရဲ့ အစွမ်းကြောင့် သင့်ရဲ့အလှဟာ အံ့မခန်းပေါ်လွင် ထင်ရှာစေမှာပါ။
လိမ္မော်နီအရောင်က စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော နှုတ်ခမ်းအလှကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။
လိမ္မော်ညိုအရောင်က တည်ငြိမ်လန်းဆန်းသော အလှကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။
တောက်ပတဲ့ လိမ္မော်ရောင်က ငယ်ရွယ်နုပျိုမှုကို ပေးစွမ်းပါတယ်။
တောက်ပတဲ့အနီရောင်က ထင်ရှားပေါ်လွင်ဆွဲဆောင်မှုအလှကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။
Isopropyl Palmitate, Petrolatum Snow White, Octyl Methoxycinnamate, Olive Oil, Beeswax, Vitamin C, E, A, Aloe Extract,
Mineral Oil Light, Ozokerite Wax, Microcrystalline Wax, -Butylated Hydroxytoluene.
LipIce(sheer color) တွင် deep moisture complex ပါဝင်သောကြောင့် နှုတ်ခမ်းသားကို စိုပြေနူးညံ့စေပါသည်။
Oilive oil နှင့် Vitamin C,E,A တို့အပြင် သဘာဝပျားဖယောင်း စစ်စစ်တို့ကြောင့် နှုတ်ခမ်းလွှာနူးညံ့မှုကို အထူးရရှိစေမည် ဖြစ်ပါ သည်။
Sheer color၏ထူးခြားချက်မှာ- Sheercolor သည် ပန်းရောင်နှင့်လိမ္မော်ရောင် မသိမသာကွဲပြားခြားနားသော သဘာဝအရောင်ကို ဖြစ်စေသောကြောင့် အသုံးပြုလိုက်သည်နှင့် တပြိုက်နက် နှုတ်ခမ်းသား၏ သဘာဝအရောင်တိုင်း ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။
သဘာဝအတိုင်း လှပလိုသူနှင့် နှုတ်ခမ်းနီအရောင်ရင့်ရင့်များကြောင့် နှုတ်ခမ်းသားပျက်စီးမည်ကို စိုးရိမ်သူများအတွက် အထူးစီမံထားပါသည်။
ထို့ကြောင့် သုံးစွဲသူတိုင်း တမူထူးခြားလှပသော အရောင်အသွေးနှင့် စိုပြေနူးညံ့သော သဘာဝနှုတ်ခမ်း တစ်စုံရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
နေရောင်ခြည်ဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးသောကြောင့် နှုတ်ခမ်းညိုမဲခြောက်သွေ့အက်ကွဲခြင်းများမှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
Vitamin A မှနှုတ်ခမ်းသားဆဲလ်များ ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ခြင်း၊ Vitamin C ကြောင့် နှုတ်ခမ်းသား ပြန်လည်စိုပြေစေခြင်း၊ Vitamin E ကြောင့် နှုတ်ခမ်းသားစိုပြေနူးညံ့မှုကို အချိန်တိုင်း ရရှိစေခြင်းတို့ကြောင့် သုံးစွဲရန် အထူးသင့်လျော်ပါ သည်။ နှုတ်ခမ်းကွဲအက် ခြောက်သွေ့ခြင်းတို့ကို အထူးကာကွယ်ပေးပြီး အစိုဓါတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့် အခြားနှုတ်ခမ်းနီကို အသုံးပြုခြင်း မရှိသော်လည်း ပန်းရောင်နှင်းဆီပွင့်ကဲသို့သော သဘာဝပန်းရောင် နှုတ်ခမ်းရရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
Find LipIce on